ညအခြိနျမတျော စိုးရိမျရတယျဆိုပွီး စာပို့နတေဲ့သူတှကေို နောကျမပိုဖို့ တောငျးပနျလိုကျတဲ့ နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျ - PS Myanmar
ပရိတျသတျကွီးရေ ပွညျသူခဈြသရုပျဆောငျနှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျဟာဆိုရငျ အနုပညာလောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျလာခဲ့ပွီး ပရိတျသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရယူပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျနျော…။
သူမက အခုလကျရှိမှာဖွဈပှားနတေဲ့ ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ ရပျတညျနတောပဲဖွဈပါတယျနျော.။
နှိုငျးယှဉျမွငျ့မိုရျက အခုအခွအေနမေကောငျးဘူး၊စိုးရိမျရတယျဆိုပွီး ညအခြိနျမတျောကွီးစာပို့နသေူတှကေို နောကျမပို့ကွဖို့ ကွိုတောငျးပနျလိုကျပါတယျ။နှိုငျးရှငျမွငျ့မိုရျကတော့ ” အားလုံးကို တဈခုလောကျကွိုတောငျးပနျထားပါစေ ညည အခြိနျမတျောတော့မှ ညမရေ ပွေးတော့..
အခွအေနမေကောငျးဘူး စိုးရိမျရတယျ…ဒီညဝငျဆှဲမယျတဈနရောရာမှာသှာပုနျးနတေော့ ဆိုပွီး စာတှလောလာပို့ကွတယျ…စိတျပူလို့ပွောမှနျးသိပမေယျ့ နောကျ အဲ့လို စာတှမေပို့ပါနဲ့… ဖမျးကာမှဖမျး…ဆှဲကာမှဆှဲ….
ကြှနျမက ပွေးရ ပွောငျးရ နရောရှရေ့အောငျ ရာဇဝတျလူသတျကောငျ လညျးမဟုတျဘူး….ဘာအမှုမှလညျးကြူးလှနျမထားဘူး….ကုနျကုနျပွောမယျ….ကြှနျမ ရဲ့ အကောငျ့မှာ သူတို့နဲ့ပတျသကျလို့ ဆဲဆိုပွီးပွောဆိုထားတာတောငျ မရှိဘူး “ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
နှိုငျးရှငျမွငျ့မိုရျကတော့ ” ဒီအခြိနျမှာ မွနျမာနိုငျငံမှာ နတေဲ့ လူတဈယောကျ အနနေဲ့ ဒါမြိုးမတရားတာကိုမကွိုကျဘူးဆိုတာကို ပျေါတငျပွောရဲတယျ….ငွိမျးခမျြးစှာ ထုတျဖျောတယျ…အလှူလုပျတယျ…အရေးကွီးတဲ့သတငျးတှဆေို သူမြားနညျးတူ ကူးပွီး တငျပေးတယျ ….
ဒါ ခု တျောတျောမြားမြားလုပျနကွေတဲ့အလုပျပဲ….အဲ့အတှကျ ကြှနျမကို ညအခြိနျမတျောမှ ဟိုပွေးပါလားဒီ ပွေးနပေါလား ဆိုပွီး ကွောကျစိတျဝငျအောငျ မပွောကွပါနဲ့ .
လူတိုငျးကွောကျတယျ မကွောကျဘူးဆိုတာ ညာတာဒါပမေယျ့ ကွောကျနရေုံနဲ့ပွီးမယျ့ကိစ်စ မဟုတျဘူး ကြှနျမက အဆုံးထိ တှေးပွီး အကုနျပွငျဆငျထားပွီးသား…ဘယျမှမရှဘေူ့း “ဆိုပွီး သူမရဲ့ Fb Accမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးကို အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ…။
Credit Mdy News
ညအချိန်မတော် စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပြီး စာပို့နေတဲ့သူတွေကို နောက်မပိုဖို့ တောင်းပန်လိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပြည်သူချစ်သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာဆိုရင် အနုပညာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်လာခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရယူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
သူမက အခုလက်ရှိမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်က အခုအခြေအနေမကောင်းဘူး၊စိုးရိမ်ရတယ်ဆိုပြီး ညအချိန်မတော်ကြီးစာပို့နေသူတွေကို နောက်မပို့ကြဖို့ ကြိုတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ကတော့ ” အားလုံးကို တစ်ခုလောက်ကြိုတောင်းပန်ထားပါစေ ညည အချိန်မတော်တော့မှ ညမရေ ပြေးတော့..
အခြေအနေမကောင်းဘူး စိုးရိမ်ရတယ်…ဒီညဝင်ဆွဲမယ်တစ်နေရာရာမှာသွာပုန်းနေတော့ ဆိုပြီး စာတွေလာလာပို့ကြတယ်…စိတ်ပူလို့ပြောမှန်းသိပေမယ့် နောက် အဲ့လို စာတွေမပို့ပါနဲ့… ဖမ်းကာမှဖမ်း…ဆွဲကာမှဆွဲ….
ကျွန်မက ပြေးရ ပြောင်းရ နေရာရွှေ့ရအောင် ရာဇဝတ်လူသတ်ကောင် လည်းမဟုတ်ဘူး….ဘာအမှုမှလည်းကျူးလွန်မထားဘူး….ကုန်ကုန်ပြောမယ်….ကျွန်မ ရဲ့ အကောင့်မှာ သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ ဆဲဆိုပြီးပြောဆိုထားတာတောင် မရှိဘူး “ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ကတော့ ” ဒီအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဒါမျိုးမတရားတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာကို ပေါ်တင်ပြောရဲတယ်….ငြိမ်းချမ်းစွာ ထုတ်ဖော်တယ်…အလှူလုပ်တယ်…အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေဆို သူများနည်းတူ ကူးပြီး တင်ပေးတယ် ….
ဒါ ခု တော်တော်များများလုပ်နေကြတဲ့အလုပ်ပဲ….အဲ့အတွက် ကျွန်မကို ညအချိန်မတော်မှ ဟိုပြေးပါလားဒီ ပြေးနေပါလား ဆိုပြီး ကြောက်စိတ်ဝင်အောင် မပြောကြပါနဲ့ .
လူတိုင်းကြောက်တယ် မကြောက်ဘူးဆိုတာ ညာတာဒါပေမယ့် ကြောက်နေရုံနဲ့ပြီးမယ့်ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး ကျွန်မက အဆုံးထိ တွေးပြီး အကုန်ပြင်ဆင်ထားပြီးသား…ဘယ်မှမရွှေ့ဘူး “ဆိုပြီး သူမရဲ့ Fb Accမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။